MUUQAAL: R/wasaare Khayre oo Muqdisho kusoo Noqday iyo Guulaha Safarkii Maraykanka | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
MUUQAAL: R/wasaare Khayre oo Muqdisho kusoo Noqday iyo Guulaha Safarkii Maraykanka
Apr 15, 2019 - 17 Aragtiyood
Muqdisho ( Kalshaale ) Xasan Cali Khayre Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo oo safar shaqo ugu maqnaa dalka Mareykanka ayaa maanta dalka dib ugu soo noqday.
Khayre ayaa kulamo Maraykanka kula yeeshay masuuliyiin kala duwan, Waxaana siwayn looga hadlay inta badan Arimaha dhaqaallaha, Amniga iyo Barnaamijka Dayn Cafinta ee Soomaaliya.
Madax kala duwan ayaa dhankooda balan qaaday inay Soomaaliya garab istaagi doonaan, Waxaana la sheegay in Safarkaasi uu guul kusoo dhamaaday.
Odey reer Boondheere ahaa oo jufadiisu Qaaran diid ahaayeen ayaa lagu darey guddiga tolka, waliba Guddoomiye laga dhigey si uu qaaran uga keeno jufada hoose.
– ok sidii ayaa lagu doortey,
Maalintii dambe ayaa la dhahey Qaaranka dadka ka qaad oo Jufadaada adigaa qaabilsan,
– waaba xanaaqey haddiiba Qaaran la soo hadal qaado, waaba kala tag haddii la dhaho Gogol noo dhig Gurigaada.
– Ninbaa dhahey, nimaan Tolkiis Qaaran dhiibin asna ka keenikarin idinkaa Guddoomiye ka dhigtey ee – ka xaab xaabiya.
– Hadda Farmaajo waxaan rabney,
1. Dhayid boogtii kala guurka
2. Dhigid Federaalkii Meles iyo
3. Dhiibid Qaarankii Qaranka.
midda kore may be,laakiin labada hoose wuxuu la kufey.
– Allow Max’ed Siyaad u naxariiso
Waa Gar Arintaasu,Oo Odaygaa Taladii Aad u dhiibteen ayaa laga Rabay Suurta-gelinta Sidii Maamulada Kismaanyo iyo Garoowe Dawlada loo hoos keeni lahaa,waxase loo baahan yahay Xasilinta Caasimada,Dhisidda Ciidan Tayo leh oo Amniga Suga,markaa Ciddii wax kugu darsanaysa Adoo Sanka Taagaya iskuna Filan ayaad kala hadli Wax-wada lahaansho,se hadaanay Jirin Waxa uun lagu odhan
“GURIGAAGA HORTA KASOO DHALAAL KA DIB DIBEDIISA KA HADAL”.
Ragonimo waaye ninkii ku dhaho adigu is toosi, laakiin ninkii ku dhaho qeybayda anigaa gooni u leh, taadana hadaadan 4.5 noogu qeybin Meles ayaan la shirkoobi kawan.
Soo maadan aqrin @ Land of Punt oo leh ama degmooyinka Xamar noogu qeybiya 4.5 ama Tigree ayaan wax ku darsan.
Ninkii kuu daayo saligaada Kaadida leh, rag ahaa laakiin waan ku tukan, Nadiifintiisana adigey gooni kuutahey Meel saar.
Xamarta aad iska kay xijinayso reer adeerkay ayaa qayb libaax ka qaatay dhismaheeda in maanta Villa Somalia Farmaajo fadhiyo ragbaa dhiig u dhubay oo mooryaanti dadka ka qabtay oo suray calanki bluele Villada markaad ku xaarteen.
Maantana ninkaan goboliisa quruxsan karin dee eey ha cuno.
Mideeda nin ciilan ayaad u egtahay ma kuwii Cabdulahi Yusuf AUN dalka ka cayriyey ayaad ku jirtay oo fulaynimo ayagoo baqo kabaha gacanta ku sita qurbaha noogu yimid….😄
Beryahaan cabaadkaaga Kalshaale waa laga yaaban yahay…..kkkkk
Canshuur la iga cunay kuye, war macal deeq iyo deyn wixii Somali lahayd Xamar masoo dhaafin….hana cunin anaga oo Engriis cayrtaada ku qaado, qaswade ayaa tahay dalkii lagaama rabo..HAG ciil qaba.
Waxaad qortay1967 in reer Muqdisho yeelaa,
Guddoomiye Parliament Raxanweyn ah.
Anaa kuu dheegaya, meesha reer Mataan Balcad bal ka keena iyo Wacdaan jowhar jooga ayaa ugu dhawaa…..kkkkkkk
Daaiud Adan Yabaal degena.
Cabdulahi Ciise iyo Adan Cabdulle oo reer Kenadiid iyo Muuse Mataan family isla ahaayeen…
Ogolaaday kuye, yaa Hiraab liis ugu jiray…kkkkkkkk
Ma dhulka lagu habsaday ayaad mooday Awoowe kuugu kuugu aasan yahay….
Maxaase Hiraab laga rabaa Mareexba Gedo ka yimid Majeerteen Bari ka yimid inkasta oo kadoo horeeyeen inta kale….kkkkk
Adan Cade Mustaxiil ku dhadhay, Reer Kenadiid sida Cabdirashid iyo Cabdulahi Cise waa reer Mudug.
Abgaal mid wax qori karey laga waa…..
Kkkkkkkkkkk, msxay talo qabtaan, goofkii, Moxog iyo Waambe diide in ka tagaan oo qalinka qaataan😄😄😄😄😄😄
Nin taariiq og hakuu waramo
LOP adeer, inkastoon dhib ku qabo fahamka qoraalada Dabshid haddana abidkay ma arag isagoo caytama MARKA waxaan kugula talin INAAD luuqadiisa kula hadasho. *Inaan maqalno oon laga jawaabin cayda ay sOmalilander & Canuga Laalaysa ka soo tuuraan Waqooyi, waa noo caado LAAKIIN inay reer koofur ayyaguna caytamaan “xataa hadduu yahay Garqaad” WAA waxaan la qaadan-karin. WBT
Adeer Ahmed Somali.
Adba Hawiye ayaa tahay waad ogtahay in LOP Hawiye necbayn oo waxwalba isku nahay.
Rag iska celi iyo rabi ka baq meel mawada galaan waa maahmaah reer Mudug.
Aniga oo rag iska celinaya oo saxanka wax igu siiseen ugu shubaya adiga oo wadani ilaah qabiil ka koriyey oo isbecel ku dhex koray aniga oo qabyaalad qaxooti iga dhigtay hadalkayga marmar waa talaxtegin…
Meesha ragbaa qabyaaladooda la jaro barayaa in qabyaalad wado lagu hoogay tahy oo tusin in gobolkayga igu filan yahay hdaad Somalimo kaa waayo.
Aniga Baraxley hala iisoo dhaafo adoo Farmaajo ah oo qori sita.. .
Dambigii dadkayga laga galay welina loo dhaaranayo, walle futada xabad la iska helin.
Kacaankii ayaa i siray ma HAG ayaa in isiraan ka yeelin?
Adiga wadani ah odayaashaan ciyaal isku malweya ma fahmi kartid…..🐥
Dabshid nacayb uma qabo, caawa hubaa hadaan narto in xaaxiibo noqpn lahayn…
Fikirkiisa ayaa ka doodayaa shaqsigiisa ka doodi maayo.
Wuxuu rabaa in ii dowladeeyo oo Xamar qabsado Majeerteen noqdo qabiil asaga masagada u miiso iyo Darood oo dhan….kkkkk
LOP yeeli maayo taas..waxaan leeyahay war Suldaankaagii haku caasiyin, caado laga tago carro alle ayey leedahay..kkkkk
Peace for Maryooley😄
Adeer Hal nin oo cey iga sheegan karo waxaa ka jiro ( iley Luf Luf Axmaaro ) oo aan dhahey iley.
Alle ha iga cafiyo la iskuma caayo Qadarka, laakiin ma diidi jirin, waaguu ahaa Dabo qoodhi.
Adeerkaa Faroole ayaa kaa raganimo badan, mar uu Waqooyi tagey ayuu dhahey – Reer Hargeysow intiinan yaa Xamar ku dhashey, markaas ayuu ka waayey hal qof oo farta taago,
Wuxuu dhahey anagaa idinka ragsan oo LABADA GACMOOD WADA TAAGO xataa XABAGLAHA Xaafuun.
– Hadda sxb labada lugood xataa ku darso, laakiin Burtinle ii joog.
Buurtinle waa fogtahay ee Mudug iyo xeebihii Hobyo godan sida Garacad ayaan iimansaday oo fahmay in iga badan yihiin, wataas Carabtii hunguri kasoo galay Puntland, Malaygii iyo arigiina dhoofsan…
igu filan Dhul Udug ee cabaadka iga yaree iyo lacagta wax iga sii…
Maanaa kugu haysto Xamar Cade iyo xoolihii Somali loogu deeqay oo bililiqaysateen…
War hala qaraabtago ilaa Mooryaanimada iyo talada aad HAG group ka qaadanaysaan ka baxaysaan.
Somali waa dad yar oo dhul weyn haysta, qolo walba meesheeda ku dhargi kartaa.
Somalinimo iyo dowlad adeec marka la timaadaan ayaan miiska soo fariisan inta ka horaysa aan aragno ninka colaad iyo gaajo la cabaada oo dhulkiisa hagaajisan karin.🤘
waligiinba UGUS guriga ku qarsada idinka oo isleh kii Daarood yuu idinkusoo noqon.
Ragga Xamar mudaharaadaya oo qaska ka wada waa Hiraab laakiin ma oga intaas goboladdii waa sii xoogaysan oo isku filnaan.
more aad qas sii wadaan waa more goboladdii kasii madax banaanadaan Xamar.
Somalia independent states ayey ku socotaa.
Hadaad aqli leedahay waxaad fahmi lahayd: Federalka aan diidanahay wuxuu gaarin meel la xakamayn karin oo sida dal gooni ah u dhaqmaan hadaan Xamar degin oo dowlad xoog leh dalka hogaamisa ka dhalan.
Federal ma rabo Xamarna waan qasin, waa aqli 6 saacnimo….kkkkkkkk
Xamar anigaa leh oo Faroole aniga biila!!!! iyo Federal waa Talo Amxaar keenay ee naga tuura, Puntland magaceeda ma rabo, dadkeeda waa dad dudun saaran, saxare qarax ah….runta sida tahay aniga wax igama gelin ee waa sida aan jeclahay….
Ma ninkaas ayaa fayoow oo dal ku darsan, waaba HAG aka Hawiye Action Group oo xanaaqsan…
Waali waa dhaaftay iyo Farmaajo dowladiisa dumiya ee buulkoodii maxasta ugu jirtay ayey dab ku shidayaan, ka celcelis lagu jiraa…. Waa wada qaswade.
U malayn maayo energigii ku jiray Cabdulahi Yusuf, Geedi iyo Faroole in markale la helin si Xamar u degto, yaan maatada la qixin, qaska hadda Xamar laga wado halaga hortago ama caanaha laga dhamo yaan aniga wax la iga siin.
Ma waxaad moodeen waagii dalka Xamar keliya ahaa oo nolol meel kale ka jirin, walaan xitaa Baydhabo maanta Xamar u dhutinayn.
Ragga geela lahow ciinka ka ceshada.
Hadii kale biqleeya sida caruurta marka la dhargo hadhowna hala ooyo marka la gaajoodo oo geerida badato….. Farmaajo Buffalow ku noqon marka barako malaha gaarto….xaa dhulka ka yaal…kkkkk
Markaan usoo noqdo Khayre iyo safarkiisii waa in Parlemanka hordhigaa wixii soo saxiixay…
Ninkaan qalinka la ordaya halawaydiiyo meeqa dayn dulsaar la socdo soo saxiixday asaga iyo Bayle oo xoogaagii hore Hargeysa hoteel uga dhisnaya according Khatumonews.
18 bishan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacaya banaan bax wayn oo ay soo abaabuleen Hawiye.Waxa la diidan yahay waa dawlada la dhoob dhoobayo ee Muqdisho degan.
Aabaaulkan xooga le ee dadka kiciyay,maxaa looga hor tagi waayay Alshabaab?
Maxaa loo waayay abaabul noocan ah oo ku wajahan Alshabaab.
1 qarax oo ka dhacay Zoobe ayay ku dhinteen dad gaadhaya 800 oo qof.Haba yaraatee lama arag wax dadaal ah oo ku wajahan in layska dhciyo Alshabaab.
Saw lama odhan karo Alshabaab iyo dadka maanta dadka abaabulayaa waa isku mid?
Saw cadaan maaha oo dibada uma soo baxayso midabkii runta ahaa ee Reer Muqdisho?
Saw ma muuqato in qaraxyadii la joojay oo loo badalay Kacdoon shacab?
Dhibka ay Alshabaab ku hayso Reer Muqdisho iyo dhibka ay dawladu ku hayso keebaa xun?
Keebaa ku haboon in loo midoobo?
Wiilka Bajaajka watay ee ku dhintay gacanta ciidanka ma wuxuu ka duwan yahay kumanyaalka ay Alshabaab layso ee aan cidi iswaydiinin?
Alshabaab iyo dawlada,keebaa ku haboon in loo midoobo oo layska dhiciyo?
Hiraab dowladnimo in soo noqoto ma rabaan, ha moodin Farmaajo iyo Khayre in loogu mudaharaadayo Hiraab maahan ee dowlad dhan lama rabo.
Waxaa la istusay in haddii dowlad soo noqoto canshuur iyo shati keliya dalka wax lagu soo dejin karo, in saldhiga booliska la geyn kii amar dowlo diida…hadda intaas cidna ma weydiiso.
Dadka ay qabyaalad ku kicinayaan dan uma hayaan Mooryaanta waaweyn oo Xamar iyo dalka u afduubnaa 30 sano. In Xamar looga guuro tegin aakhirka ama xoog loola tago.
Dowlad la’aan 30 sano, waa muddo dheer.
Inta wadanka caasumad lahayn gobolada kale waa sida mas madaxa ka dhaawacan oo iska rafan laakiin nool.
Daanyeer baa Xamar qasaysa… Shaaha ku caba, aryaa Darood iyo Murursade sow noogu halihaa, xaa duqii loola diriraayey! kkkkkk
Haddii med Abgaal ah loo dhiibo xitaa ku kicin.
Cali Mahdi, Cabduqasin, Cabdulahi, Xasan iyo Shariif ma med la jeclaa ayaa jiray yaase lugta ku dhagenaa.
Cabdulahi Yisuf iyo Farmaajo waxaa codka loo siiyey kuwaan markii rabno aan dadka waa Darood in lugownaa dadka ku kicin karnaa ee mid Hiraab ah balow nagu xididaysay oo dowlo nagu keen.
Hiraab waa sheeko beryaan boorka laga jafay ee cidna Hiraab jid kuma mari jirin waagii hore.
1 qof oo askari dilay shaqo ku jira waa dhul gariir iyo dowladda hala rido laakiin xasuuqa iyo qaraxa kuwa wada, gurigaa lagu qarsanaa…
War Borama u tasho ama Isaaq ku darso aday ku jirtaa ee meesha calaacalka kala tag.
Hargeysa aad fucking street ku sheegto ayaa ku huran ee iska maslaxee mise buurta weligaa ku jirin sida daanyeerta?
Suldaan duurgalow baa yaabay!